Nieves Herrero: "Ini handizive maitiro ekugadzira, ini ndinogona kungotaura izvo zvandakaona" | Zvazvino Zvinyorwa
Pakubvunza padandemutande nezve "Nieves Herrero Libros", mhedzisiro yacho inonongedzera kunoverengeka yazvino neMadrilenian: Mazuva ebhuruu iwayo (2019). Iyi nhoroondo yezvakaitika yakashamisa zvikuru nyika yekunyora, uye yakanakidzwa nemifungo yakasiyana siyana kubva kuvatsoropodzi. Mubasa, munyori anotiratidza zvakare nechirongwa chine vapikisi chaivo uye chakarongedzwa nekubata kwechiedza kwenhema, umo maanosimudzira vakadzi vane mukurumbira venguva pfupi yadarika.
Iyo inoverengeka Mwedzi wakaputsika uyo (2001) yaive danho rekutanga raHerrero muzvinyorwa. Mushure meiyi kutanga, veSpanish akabvuma muhurukuro Izwi raGalicia uve munyori wenhau. Panguva iyoyo akati: “Handina zvekuita, nekuti ndiri mutori wenhau. Handizive kugadzira, ndinogona kungotaura zvandasangana nazvo, zvandakanzwa kana kuudzwa ”.
1 Mabhuku akanakisa naNieves Herrero
1.1 Iyo Yakaputsika Mwedzi (2001)
1.2 Indian Mwoyo (2010)
1.3 Zvinotarisirwa Nemaziso Ake (2013)
1.4 Sokunge pakanga pasina mangwana (2015)
1.5 Mazuva Bhuruu (2019)
2 Nezve munyori
2.1 Mabhuku emunyori
Mabhuku akanakisa naNieves Herrero
Mwedzi wakaputsika uyo (2001)
Iri ibhuku rekutanga naNieves Herrero. Iyo inoverengeka yakanangana nekurambana kwegweta reMadrid vaviri, avo vanga vari pamwe chete kwemakore gumi nemana. Kunyangwe iri nyaya yekufungidzira, kune zvakawanda zvezviitiko zvemunyori mairi; Panyaya iyi, akareurura: "... zvaitove kurapwa, nekuti ndaifanira kushandura zvandaive nazvo mukati kuita chimwe chinhu uye ndakazadza mapeji nemanzwiro."
Beatriz naArturo vakaroora uye vane mwanasikana ane makore maviri ekuberekwa, Monica. Pasina kana kufungidzira, mukadzi anoona kuti murume wake haana kutendeka kwaari, mamiriro anoiparadza zvachose. Naizvozvo, anofunga kusarudza pakarepo kurodha chikumbiro chekurambana uye kukumbira kuchengetwa kwemwanasikana wake mudiki. Aya ndiwo maratidziro anoita danho rekuparadzanisa uye kuora moyo kwaBeatriz, anova ndiye anozvidzivirira.
Mwedzi wakaputsika uyo
Indian mwoyo (2010)
Icho chiitiko chekunakidzwa uye cherudo chine protagonista a Lucas Millan. Uyu anotambura tsaona yakakomba uye anofanirwa kuisirwa nekukurumidza sezvazvinogona. Sezvo nguva yekuvhiya yave kuda kusvika, vanachiremba vanowana moyo wejaya iri. Kupindira kunoitwa pasina kana kufungira kuti mabviro enhengo aigona kukanganisa hupenyu hwaLucas.
Maitiro acho akabudirira. Asi zvakadaro, apo jaya richipora anotanga kuve nendangariro dzechienzi uye manzwiro asinganzwisisike. Munguva pfupi, anoona kuti zvese zvine chekuita nemoyo waakagamuchira - ndewemuAmerican American - uye nekuda kweizvi anofanira kuzadzisa basa rakakosha. Panguva imwecheteyo, anodamburwa pakati pevaviri vanodanana, iye wemukadzi muhupenyu hwake uye neuyo moyo wake waanoda, uyo ari kure kwazvo naye.
Indian Mwoyo (Mucheche ...
Izvo maziso ake aive akaviga (2013)
Iyo rondedzero nezverudo rwepachivande pakati paMarchioness Sonsoles de Icaza uye gurukota Ramón Serrano Suñer Mukuwasha waFranco. Ose ari maviri akakosha manhamba enguva yehondo yapashure pehondo muSpain, zvese mune zvemagariro uye zvematongerwo enyika. Iyo novel yakagadziridzwa kuita miniseries muna 2016, kutepfenyurwa naTelecinco uye nyeredzi naBlanca Suárez, Rubén Cortada naCharlotte Vega.
Nyaya inotanga riinhi Carmen - mwanasikana wevanyori vakuru- anosangana nemutori wenhau Ana Romero, anonyora memoir. Munyaya yake inotaura kuti akawana sei kuti Marquis Francisco Diez de Rivera aive asiri baba vake uye kuti aive chibereko chehukama pakati paamai vake naRamón Serrano Suñer. Pamusoro pezvo, anotsanangura sei - gare gare - iye akatarisana nekudanana nemunun'una wake.
Zvadaro, rondedzero inoenda kuna 1940, when pamusangano wevanhu vazhinji Sonsoles anoziva kune akakosha gurukota reFrancoist Ramon Serrano Suner. Ivo vaviri mesmerized uye ivo vanotanga rudo runopisa muchivande. Mushure memakore maviri anodakadza, runyerekupe rwehukama hwavo mafashama mumigwagwa yeSpain, mamiriro ezvinhu ayo Franco anonyatso kupatsanura mukuwasha wake kubva kuhofisi.
Izvo Zvinovanza ...
kunge kana mangwana kusipo (2015)
Ndicho novel yakavakirwa parudo nyaya , que yaivepo pakati pemutambikadzi Ava Gardner nemurwi wechiSpanish murwi wemombe Luis Miguel Dominguín. Zano racho rinosanganisira vehement hukama hwevanotungamira vaviri, kuwedzera kune mamwe maratidziro ehupenyu hwavo hwega. Nenzira imwecheteyo, chokwadi cheSpain pasi peudzvanyiriri hwaFranco chinoratidzwa, mushure memakore anopfuura gumi Hondo Yenyika yapera.
Vakakurumbira Ava Gardner anosvika kuSpain kuzorora mushure mefirimu yake ichangoburwa. Parizvino, ane zvakawanda zvekukwira nekudzika nemurume wake -Frank Sinatra-, saka mazuva mashoma muMadrid angave akamunakira. Inguva yegore apo zvese anotumbuka, nharaunda yakanaka inoita pop kupisa kwerudo uye neshungu pakati pemutambi uye Luis Miguel mushure mekusangana maziso avo kekutanga.
Sokunge pakanga pasina ...
Mazuva ebhuruu iwayo (2019)
Ndiyo bhuku razvino kwazvo nemunyori. Mune zvinyorwa zviri inotaurira nyaya yemunyori wenhetembo uye munyori wemitambo Pilar de Valderrama. Iyo zano rinoburitsa chakavanzika chisinganzwisisike: mukadzi, iye amene, ndiGuiomar, iyo musori we Antonio Machado. Musoro webasa unobva pachidimbu chedetembo rakawanikwa musutu yakapfekwa neSpanish pazuva rekufa kwake, uye iro rinoti: "Aya mazuva ebhuruu, iri zuva rehudiki."
Herrera akasvikirwa naAlicia Viladomat - muzukuru waPilar - uyo aida kutora ndangariro dzaambuya vake dzezvizvarwa zvinotevera. Mune ino nyaya refu, Inotsanangurwa madetembi mudiki mudetembi - mushure mekuziva nezvekusatendeka kwemurume wake - anosarudza kuenda kunoona makirasi naMachado. Pakusangana, vaviri ava vakanzwa kubatana kwakadzika, uye rudo rweplato rwakafemera nhetembo zhinji dzemunyori.
Iwo mazuva ebhuruu (MAXI)
Mutori wenhau wekuSpain uye munyori Nieves Herrero Cerezo akazvarwa munaKurume 23, 1957 muMadrid. Muna 1980, akapedza degree neUtapi venhau kubva kuComplutense University yeMadrid. Makumi maviri emakore gare gare, akapedza kudzidza segweta kubva kuEuropean University yeMadrid. Herrero ane nhoroondo refu munyika yenhau, aine angangoita makore makumi matatu nemashanu ekushanda.
Quote naNieves Herrero
Munguva yebasa rake akafamba nemhando dzakasiyana siyana, mamwe acho: Antena 3 Radio, TVE, RNE, Telecinco naOnda Madrid. Pamusoro pe, inoratidza kupindira kwake muzvirongwa zvakasiyana pawairesi neterevhizheni, iyo yakapihwa pazviitiko zvakasiyana. Parizvino, anotungamira uye nezvipo Madrid Yakananga kubudikidza Madrid wave uye inoshanda pamwe mu Iyo awa ye1 Mugero The 1
Kubva 2001, iye anosanganisa rake rezvenhau basa nemabhuku, munda mune iyo zvakare yakaveza kunze rakabudirira basa. Nemabhuku masere ese, munyori wechiSpanish akawana mazana evaverengi, vanofarira ngano dzake dzinonakidza uye dzakasiyana. Mazhinji emabasa ake akavakirwa pa nhoroondo dzekare yakashongedzwa nengano, pakati pavo inomira pachena: Izvo maziso ake aive akaviga (2013).
Munguva yebasa rake, Nieves Herrero anga achizivikanwa nekusimudzira vakadzi. Saka, mazhinji enhoroondo dzake anoitwa nevakadzi. Saizvozvo, Akanyora kune diary El nyika vanopfuura zana mabvunzurudzo anonzi: "Ndoga navo ...", iyo yakaitwa kune vamwe vevakadzi vakakurumbira veSpanish nzanga.
Mwedzi wakaputsika (2001)
Zvese zvaive pasina, Leonor. Mambokadzi anozvarwa (2006)
Mazuva ebhuruu iwayo (2019).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Nieves Herrero: mabhuku